Home > Mifandraisa aminay
Fitaovana matevina mifoka rivotra
Sarontava azo ampiasaina ho an'ny ankizy
Dongguan Fuya Hardware & Plastic Products Co., Ltd. dia fitaovana, plastika ary bobongolo orinasa fanodinana vokatra miaraka amina fitaovana teknolojia avo lenta sy teknolojia mahay. Ny orinasa dia miavaka amin'ny famolavolana bobongolo sy ny famokarana, ny famolahana tsindrona, sy ny fanodinana faritra an'ny CNC.
Ny adiresin'ny orinasa: Room 101, Building B, No.15 Huabutang, Changan Tang Village, Dongkeng Town, Dongguan City
Ny anaran'ny orinasa: Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Mifandraisa amin'ny telefaona: + 86-18938236710
Aza misalasala mifandray aminay ~
Azonao atao ve ny manontany anay raha misy fanontaniana. Azo antoka fa hanome fahafaham-po anao ny vidinay sy ny serivisinay ~
Inona no atao hoe kidoro silicone? Ratsy ho anao ve izany?2020/10/28
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​ny fahasalaman'ny torimaso koa dia manan-danja kokoa.
Zava-dehibe ilaina amin'ny dia - hangers azo aforitra azo averina2020/10/28
Moa ve ianao efa tao anaty toe-javatra iray izay tianao ahantona akanjo ho mainaina amin'ny fotoana rehetra, fa ny mpananton-damba dia mitaky toerana be loatra.
Amin'ny firy taona ny zaza vao afaka mampiasa ondana2020/10/27
"Firy taona ny zaza vao manomboka mampiasa ondana?" Ny lohahevitra dia nanjary lohahevitra mafana teo amin'ny tontolon'ny fitaizan-jaza. Saika nanomboka ady an-trano ny fianakavianay omaly, raha nifamaly mafy aho tamin'ny fanoheran'ny reniko ny tokony hametrahana ilay zaza. fandriana tamin'ny telo volana ary nihorakoraka ny fomba fihevi-diso momba ny fitaizan-jaza. Mazava ho azy fa ny farany na ny reniko nanao hoe "Tsy ianao ve no notezaiko ka? Nahazo fandresena lehibe. Tsy te ho resy aho, ka izaho tokony hanazava aminao tsara ny fomba fijery marina.
Ianao ve hisisika hanao sarontava2020/10/26
Amin'ny taona 2020, noho ny fiantraikan'ny valanaretina, tsy azo ihodivirana ny fanovana ny fiainan'ny olona sy ny asany. Na dia mandritra ny Fetiben'ny lohataona mafana teo aloha aza dia tsy maintsy miafina ao an-trano ny olona. Saingy vokatr'ity valanaretina ity dia nitambatra ho iray ny firenena iray manontolo. Firy ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy tsy nijanona vetivety, ary firy ny miaramila nijanona ho adidy! Tamin'ity taona ity, niantehitra tamin'ny ezaky ny tsirairay izahay mba ho tafavoaka velona, ​​saingy tsy afaka nanala mora foana ny saron-tava izahay.
Ny ondana ve no an'ny loha sa ny hatoka?2020/10/26
Ny olon-dehibe iray dia tokony hatory tokony ho amin'ny fito ka hatramin'ny sivy ora isan'andro, izany hoe ny ampahatelon'ny fiainana no mandany torimaso.
Sina no firenena voalohany teto amin'izao tontolo izao nampiasa sarontava. Tamin'ny andro taloha, mba hisorohana ny fahalotoan'ny vovoka sy ny fofonaina, dia nanomboka nanarona ny vavany sy ny orony tamin'ny volo landy ny olona tao amin'ny fitsarana. "Mencius · From Low" firaketana: "Xi Zi maloto, avy eo manarona ny orony ny olona rehetra ary mandalo.